Archive du 20180901
Hitany nampiaraka ny vadiny Nandoro tena tamin’ny lasantsy ilay bandy
Tsy nino izy raha tsy nahita, saingy nony nahita dia ny famonoan-tena no fanapahan-kevitra maika noraisiny.
Fitetezam-paritra etsy sy eroa Mitazam-potsiny ny praiminisitra Ntsay
Mihetsiketsika avokoa ankehitriny ireo kandida filoham-pirenena. Misy tamin`izy ireo no tsy nahandry tantana kanefa ny lalàna manan-kery
Tabera Randriamanantsoa Manangam-pahavalo
Tsy marina ny filazana fa “régionaliste” aho, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanatsoa, raha nitokana ny foiben’ny fampielezan-keviny tetsy Tsaralalàna omaly.
Camille Vital “Nomena ireo mpitandro ny filaminana ireo 4x4”
Omaly indray vao niverina heno ny feon’ny filohan’ny antoko Hiaraka Isika, Camille Vital, nandritry ny fanambarany ny fanohanana kandida filoham-pirenena iray tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo.
Ady amin’ny kolikolim-pifidianana Havoaka ny sata manokana
Ny alatsinainy 3 septambra izao no hampahafantarina etsy amin’ny foiben-toerana komitin’ny fampihavanana Malagasy na CFM ny sata manokana na “charte” mikasika ny ady atao amin’ny kolikolim-pifidianana (corruption électorale).
Didier Ratsiraka Hanangana governemanta …
Misoko miadana ny famondronan-kery sy ny fampitoviana tadindokangan’ny mpanao politika hanemorana ny fifidianana. Raha ny loharanom-baovao voaray, misy amin’ireo kandida filoham-pirenena no miara-miketrika an’io.
Mpomba ny kandida Solo Norbert Nosamborin’ny mpitandro ny filaminana
''Tsy ho an'ny mpanongam-panjakana ny fitondrana''.
Andry Rajoelina Fohazin’ny olona ny afera malotony
Miisa 36 ireo kandida filoham-pirenena fa i Andry Rajoelina no ratsy laza sy tototry ny fanakianana maro.
Fikambanana AV7 Tsy mila an-dRajoelina ?
Hiatrika fifidianana isika, ary hita foana ny fikambanan’ireo niharam-boina tamin’ny tifitra teo Ambohitsorohitra ny 7 febroary 2009 na AV7 hatramin’izay nisiany taorian’ny raharaha 2009, indrindra vao resaka politika.
Mpiasan’ny fadin-tseranana Ampiadian-dRtoa minisitry ny vola
Manoloana ny grevin’ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana dia nisy ny fanambarana nataon’ny minisitry ny fitantanam-bola sy ny tetibola izay nilaza fa ny mpiasa mitokona ao ihany no nanipika ny taratasin-karama (bon de caisse sy ny bulletin de solde) tamin’ny penina menamena.
Fampiroboroboana ny fizahantany Niampy matihanina miisa 550
Teny amin`ny Maining Buisness Center Ivato no nivoaka tamin`ny fomba ofisialy omaly ny andiany “TSIRI” (Tanora Sahy Iatrika ho Reharehan’ny INTH), avy ao amin’ny ivontoeram-pirenena momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny INTH Ampefiloha.
Kitra-Tournoi Dandjy/3FA Hanomboka ny 3 septambra ao Mahajanga
Hotontosaina any amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga ny 3 ka hatramin’ny zoma 7 septambra 2018 ny andiany faha-8 amin’ny « Tournoi Dandjy/3FA » natokana ho an’ny sokajy U10, U13, U15, U17, U20 ary ny sokajy vehivavy.
Boriborintany Fahatelo Mikarakara Tournoi “foot à 7”- sénior
Mikarakara fifaninanana lalao baolina kitra lalaovin’olona fito ny avy ao amin’ny Boriborintany fahatelo - Antananarivo tohanan’ny orinasa Airtel.
Kitra-« Poule des As » Vonona hatrany ny Elgeco Plus
Anio sabotsy 01 septambra 2018 no hotontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny lalao « Poule des As » andro faha-4
Kitra - ASIEF Analamanga Fantatra avokoa ireo tompondaka
Voahosotra ho tompondakan’ny baolina kitra ASIEF « Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires »
Mba tsy hilazana hoe miantso fanjakan’i Baroa dia andeha atao hoe miantso baranahina tanteraka ny fihetsiky ny mpitondra sy mpanao politika eto amintsika tanteraka.
Fitateram-bahoaka Tsy hitokona indray ny taksibe
Efa samy niasa saina mafy avokoa ny rehetra manoloana ny fitokonana hataon’ireo taksibe rehetra eto an-drenivohitra manomboka ny alatsinainy izao.
Tetikasa FIahiana AN-TSEkoly Mampakatra ny voka-panadinan’ny mpianatra
Nanatanteraka fanaovan-tsonia fiaraha-miasa ny fikambanan’ny Tanora Mpanao gazety Malagasy (AJJM), ny fikambanana Patrakala, ny tetikasa maneran-tany ho amin’ny sakafo (PAM) ary ny minisiteran’ny fanabeazana.
Kandida ho filoham-pirenena Tokony hanao tolotra politika vaovao
Tsy mifanaraka amin’ny zava-misy sy ilain’ny vahoaka Malagasy ny ankabeazan’ny tetikasan’ireo kandida mirotsaka ho filoham-pirenena, hoy ny mpahay toekarena Hugues Rajohnson.
Lalao FUN QUIZZ Lasan-dRanaivoson Herivola ilay fiara Fiat Punto
Natolotra omaly teny Andraharo ny lokan’ireo tsara vintana tamin’ilay lalao Fun Quizz andiany faha-27 nokarakarain’ny Airtel. Ranaivoson Herivola no nahazo ny fiara kely vaovao marika Fiat Punto loka tamin’izany.
Jacques Rabemananjara Hampahafantarina ny sanganasany
Mba hahafahan’ny taranaka faramandimby mahafantatra an’i Jacques Rabemananjara mpitolona mafana fo sy anisan’ny mpamorona ny antoko MDRM dia hampahafantarina mandritra ny andro maromaro ao Toamasina ny fiainany sy ireo boky nosoratany.
Mpanao vola sandoka Voasambotry ny FIP ny roalahy
Ela nanaovana fangalapiery tamin’ny mpitandro ny filaminana fa tra-tehaka tao Ankirihiry-Avaratra ihany omaly zoma 31 aogositra ireo mpanao vola sandoka tao Toamasina.
Mbola ao anatin’ny tsy fahasalamana tanteraka ankehitriny ny mpitarika ilay hetsi-bahoaka ho an’ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony,
Toliara Nahazo fotodrafitrasa telo sosona
Fotodrafitrasa vaovao telo sosona no vitan’ny fanjakana tao Toliara, ka natolotra ny vahoaka omaly.
Anosibe Angarangarana Trano maro lasa lavenona
Trano hazo manodidina ny 20 sy trano lehibe vita amin’ny biriky miisa 5 no rotidrotiky ny afo teny Anosibe Angarangarana, akaikin’ny fiangonana FJKM Ziona Famonjena omaly hariva.
Ratsietison Jean Jacques Tsy ny Malagasy no tompon’ny vola eto
Tsy nitsahatra nihena ny sandam-bolan’ny Malagasy nanomboka ny taona 1985 ary nahatratra hatramin’ny 6000% hatramin’izao.